» ‘बकैयावासीले चिन्ता गर्नु पर्दैन’
२०७७ माघ ०६, मंगलबार
‘बकैयावासीले चिन्ता गर्नु पर्दैन’
२०७७ बैशाख १६,मंगलवार १९:३८
पूर्वि मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सक्रिय छ । अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु अभियानमै नियमित जुटिरहेका छन् । राहत वितरण, स्वास्थ्य परीक्षणका काम निरन्तर भइरहेको छ । गाउँपालिकाले कृषि, उत्पादन र विकास निर्माणको कामलाई केही सहज बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनालसंग तु खबरले (कोरोना विशेष) गरेको कुराकानी यसप्रकार छ ।
बकैया गाउँपालिकाले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा कसरी काम गरिरहेको छ ?
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिले विश्वनै जटिल अवस्थामा छ । नेपालमा पनि संक्रमित भेटिन थालेपछि सरकारले चैत ११ गतेबाट देशैभर लकडाउन गर्यो । हामीले सरकारको निर्णय र निर्देशन बमोजिम लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सम्पूर्ण गाउँबासीहरु मा अपिल गरेका छौँ ।
घरघरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री जस्तै मास्क, सेनिटाइजर, डिटोल, साबुनलगायतका सामग्री वितरण गरिनैरहेका छौँ ।
विदेशबाट आएकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेका छौँ । चिकित्सकहरुद्वारा उनीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भैरहेको छ, अन्य ज्वरोका विरामी वा कोरोनाको शंकास्पद विरामी फेला परे तुरुन्तै उनीहरुको किटमार्फत् आरडीटी परीक्षण गर्ने र अवस्था अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भइरहेको छ ।
खुशीको कुरा हालसम्म मकवानपुरमा कसैलाई पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको छैन । बकैया गाउँपालिकामा त अहिले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । हामीले लकडाउनको अवधिभर गाउँवासी भोकै बस्न नपरोस् भनेर विभिन्न चरको राहत वितरणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
कसैले म भोकै भन्न आएमा हामी उसको समस्याको सम्बोधन गर्छौँ । हामीले राजधानी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानमा अलपत्र अवस्थामा रहेका एक हजार भन्दाबढीको उद्दार गर्यौँ । अझै उद्दार गर्ने क्रम निरन्तर छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोषको अवस्था के छ ?
कोरोना मात्र नभई विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्न सक्ने भन्दै हामीले ४० लाखको प्रकोप व्यवस्थापन कोष खडा गरेका थियौँ ।
अहिले सोही प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त भएका अन्य सहयोगहरु जम्मा गरेका छौँ । बागमती प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको १० लाख र अन्य विभिन्न संघ संस्था निकाय र सामाजिक व्यक्तिहरुले गर्नुभएको नगद जम्मा गरेका छौँ । हामीलाई खाद्यान्नहरु सहयोगका रुपमा प्राप्त भइरहेको छ ।
उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नै हामीले स्वास्थ्य सामग्री, राहत खरिदको कामगरेका छौँ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्बाह गर्ने, आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय, अशक्तलगायतलाई राहत स्वरुप खाद्यान्नको प्याकेट वितरण गर्ने काम पनि भइनैरहेको छ ।
हालसम्म बकैया गाउँपालिकाका १ हजार २ सय ९७ घर परिवारले राहत सामग्री प्राप्त गरेका छन् । राहतमा उपलब्ध गराइने खाद्यान्नको व्यवस्थापन हामीले परिवार संख्याको आधारमा गरेका थियौँ । समस्यामा परेकाहरुको लगत संकलनको काम निरन्तर रुपमै भइरहेको छ ।
गाउँवासीले पहिला खान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले राहत वितरणलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेका छाँै । कोही भोकै बस्न नपरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
राहत वितरणको व्यवस्थापन कसरी मिलाउनुभएको छ ?
हामीले राहत वितरण विवादरहित र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकामा भएका प्रत्येक वडाको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर वास्तविक समस्यामा परेका छन् वा छैनन् भन्ने पूर्ण जानकारी लिएर मात्रै उनीहरुलाई सरकारको कार्यविधिमा रहेर वितरण गरेका छौँ ।
भिडभाड नहोस्, कोरोनाको संक्रमण फैलन नपाओस भन्नका लागि हामीले टोलटोलमै गएर वितरणको काम गरिरहेका छौँ ।
परिवार संख्याको आधारमा चामल १० देखि ३० किलोसम्म, दाल २ देखि ४ किलोसम्म त्यसैगरी तेल, नुन, चिउरा र साबुनलगायतका सामग्री वितरण गरेका छौँ ।
गाउँपालिकामा आवश्यक क्वारेन्टाइन कक्ष, चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री छन् त ?
छतिवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १२ बेड, ठिंगनमा ४ र हात्तीसँुडे स्वास्थ्य केन्द्रमा ४ गरी जम्मा २० बेडको क्वारेन्टाइन कक्ष तयारी अवस्थामा छ ।
तर हालसम्म कसैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था छैन । विदेशबाट आएकाहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ । केहीलाई भने हामीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेका छौँ ।
हामीसंग स्वास्थ्य सामग्रीहरु अभाव भएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरु र स्वास्थ्य सामग्री पनि अभाव भएको छैन । किटमार्फत् हामीले घरघरमै गएर आरडीटी परीक्षण गरिरहेका छौँ ।
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा खटिने सबैलाई हामीले सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ ।
गाउँवासीलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अहिले गाउँवासी कोरोनाबारे सचेत भइसकेको अवस्था छ । सचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि भइनैरहेका छन् ।
सुरक्षित रहौँ । विदेशबाट आएकाहरुले अनिवार्य परीक्षणका लागि आउनुहोस्, लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ, आफु र अरुलाई बचाऔँ ।
समस्या परे सम्बन्धित वडा वा गाउँपालिकामा सम्पर्क गरौँ । हामी त्यसको सम्बोधन गर्नेछौँ ।
कांग्रेस मकवानपुरले आज १० वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्ने
माघ ३ गते कांग्रेस मकवानपुरले १० वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्ने
शनिबार हुने विरोध प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागी हुन सभापति देउवाको आग्रह
कांग्रेस मकवानपुरले तोक्यो माघ ३ गते हुने विरोध प्रदर्शनको लागि जिल्ला प्रतिनिधि
मकवानपुर प्रहरीद्वारा ५ महिनाको अवधिमा लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न ३४ जना पक्राउ
विभिन्न पार्टी परित्याग गरी ७५ जना कांग्रेसमा प्रवेश
‘धतुरोको बोट रोपेर सुन्तला खान पाइँदैन’
मनहरी गएर कांग्रेस नेता बानियाँले भने संसद विघटन स्वीकृत भए चुनावमा जान तयार छौं
मकवानपुरको बकैयामा कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस नेता केसी हेटौंडा आइपुगे
हेटौंडा भेट्रान्स कपः आज चार खेल
हेटौंडाका दुई युवक प्रहरीको फन्दामा
कांग्रेसको अलमलले सत्ता समिकरणमा देखिएको अन्यौलता कायमै
थप ३४८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४ जनाको मृत्यु
बाल विवाह गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा ४ जना पक्राउ
‘पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सहयोग गर्छ’
असली एमाले मै हो – माधव नेपाल
प्रदेश १ – प्रचण्ड–माधव समूहको संसदीय दलको बैठकमा ३३ जना